यी कलिला ४ बालबालिकाहरुले गरे यस्तो ध’न्दा, प्रहरी पनि परे तिन छक्क ! – Classic Khabar
August 18, 2021 107
ला’गूऔ’षध ब्रा’उनसु’गर सहित झापाको बिर्तामोडबाट सोमवार दिउँसो दुई जना युवा समातिएका छन् । पक्राउ पर्नेमा हल्दिबारी गाउँपालिका–१ का २० वर्षीय सुवास न्यौपाने र बिर्तामोड नगरपालिका–१० का २४ वर्षीय समिर राई छन् ।
त्यस्तै , बालबालिकालाई रु पाँच हजार सहयोग – गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसका कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई मासिक रु पाँच हजार नगद सहयोग प्रदान गर्नै भएको छ । सरकारले १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई एक वर्षका लागि प्रतिव्यक्ति रु ६० हजार सहयोग प्रदान गर्न लागेको हो । गण्डकीमा स्थायी बसोबास गर्ने र कोरोनाबाट मृत्यु भएका नागरिकका सन्ततिले रकम प्राप्त गर्नेछन् ।
यसका लागि हाल रु ३० लाख बजेट अख्तियारी प्राप्त भएको र प्राप्त विवरणका आधारमा आवश्यक बजेट व्यवस्था हुने महाशाखा प्रमुख लम्सालले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले राहत रकम वितरणका सम्बन्धमा कार्यविधि बनाउन लागेको छ । वर्षमा एकैपटक वितरण नगरिकन चरणवद्धरूपमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई रकम प्रदान गरिने जनाएको छ ।
Prevमहिला कर्मचारीलाई यौ न दु र्व्यवहार गर्दै कामबाट निकाल्ने ध म्कि दिएका सिईओ सञ्जयको घरमा नै पुग्यो प्रहरी !
Nextमध्यरातमा फेरी मेलम्चीमा वितण्डा, थप ३ घर बगायो